Cabdiraxmaan Odowaa oo Waraysi Bixiyey iyo Weerar uu ku qaaday MD. Farmaajo | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Aug 6, 2020 - 10 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa) Wasiirkii hore ee Arrimaha gudaha Soomaaliya oo Bixiyey Waraysi Siiyey Telefishinka Goobjoog ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, isaga oo uu weerar afka ah ku qaaday Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo).
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in Farmaajo uu rabo in Madaxweyne uu sii ahaado afar sano kadib, isaga oo sharciga ku tumanayo, sida uu hadalka u dhigay. “Farmaajo wuxa uu u qaatay in isaga uu leeyahay kursiga oo loo shaqeeyo.” ayuu yidhi wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya.
Waxa kale oouu xusay in Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo) uu doonayo inuu dhisto Boqortooyo aan xilligan ka dhismi karin. “Madaxweyne Farmaajo Boqortooyo ayuu rabaa inuu dhisto, meeshaanna Boqortooya ka dhismi meyso lamana ogola, 30 beri asoo Xamar jooga oo Ameerika ka yimid ayaa la doortay, rabitaanka dadka ayaa lagu doortay, dadkii rabay mid uu been ku cabay kuwa uu dhagax u dhigay, kuwa uu albaabada ka xirtay iyo kuwa uu warkooda maqli waayey ayuu ka dhigay, laakiin ha ogaado.” ayuu yidhi Odowaa.
Odowaa ayaa hoosta ka xariiqay in Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha ay isku soo qabteen shirkii wada-tashiga ee dhowaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. “Labada kaaba laadar waxa ay isku arkeen Dhuusamareeb Xasan Cali Khayre horta waa lagala hormaray Bistoolada intaas ayey aheyd.” ayuuu yidhi Odowaa.
Ugu dambeyn wuxuu aad u dhaliilay wax-qabadka dowladda Soomaaliya, isaga oo sheegay inay ka gaabisay dhammaan qodobadii laga sugayey inay wax ka qabato. “Wax aan Ma-Sawir aheyn oo laga dhaxlay majiro, sharci darro ayaa laga dhaxlay.” ayuu yidhi isaga oo ka hadlayey wax-qabadka dowladda.
Odawas adiga iyo dowladadii damujadiid maxaad
Qabteen oo aan ka ahayn hablo la dhoofiyo iyo
Kikuyo loo sujuudo ileen af nool AAA ma daayo
Doorashaba lamagaadhin lamaba gaadhin reerkii maxaa waalay takale ninka baarqab waa wagardhac rer wardheere
Reer dhan oo isbaro uwashey iyo biliqo bowe hawiye madobe wali lamgaadhin doorasho waamaxay sasku
Ceebtiin maha waa caadadiin inaydin ka daba yuustaan nin aan ahayn daar ood gaafow hawiye waa ka uu ku joogo farmaajo ciyaal dhadhaab waqtigiisii xasuuso hadaanu u waalanay bililiqo adna qaxootigii dhadhaab baad u xiistee wax yar xaarmaajo ha ku darsado
Kkkkk ninyahow nin cajaaib ah ayaa tahay maxaa tiri baarqab waa wagardhac ma shaqsi ahaan baad isu taqaanaan dadka meeshaan soo gala waa dad is wada yaqaan baan umalayn kaligay baa meesha kuwareersan
Haa meshii allgalgaduud.com ayaa iskubaraney
nin kaa aqoon og dadkan mesha sooma galo xalay waxan arkayey adigo ka sheekey naya qaylo faraax iyo shukri walshis aad baan u garanaya marka dad badan baad halkan xalay igu soo xasusisey
anigu gacan ayaan ku taagey GEDO LAND
Asalam caleykym asxaabta. Nimaan la yirahado odawaa iska ka misa aha dana wax ka riday xukuumadda Xasan Cali Khayre. Iskaga gacanta taagaya markii la cadeenayay waxa ka heli kartiin Youtubka.
Maantayna Waxuu ku eedeynaaya waxa riday xukumadi cali Khayre farmaajo. Qaf sida uu been badan aya xil la dhiiwanaaya cajiib
Maantayna Waxuu ku eedeynaaya waxa riday xukumadi cali Khayre farmaajo. Qaf sida uu been badan aya xil la dhiiwanaaya cajiib waaye